Ulo | Subsidiary company from GuangDong Jueheng Group
Ebumnuche anyị na-enye ndị anyị na ha na-emekọrịta ihe ngwaahịa dị mma nke na-asọ mpi.
Ngwa eji akpo Bathlọ nke balọmik
Ngwa Polyresin nwere
Ngwunye ime ụlọ ciment
Karịrị 5000 set dị!
Resin / seramiiki / ciment / terrazzo
Ime ụlọ ịwụ / mma ụlọ / seramiiki tableware
Guangdong JueHeng Group dị na Dongguan City, Guangdong Province. Anyị bụ ọkachamara na ịmepụta ngwa ụlọ ịsa ahụ setịpụrụ dịka ụlọ ntanetị ịsa ahụ polyresin, ngwa ịsa ahụ seramiiki, ngwa ịsa ahụ ụlọ ịwụ ahụ, ihe ndozi ụlọ na tebụl seramiiki maka ndị na-ere ahịa na-eduga na North America, South America, Europe, Middle East na gburugburu ụwa.
Chinoiserie ọdụ ọdụ seramiiki ụlọ ịsa ahụ ngwa emeputa ụlọ ịwụ tent
Okomoko doro anya resin n'ime Stereoscopic nkume mmetụta China ụlọ ịwụ ngwa
Chinoiserie acha anụnụ anụnụ ụlọ ịsa ahụ na-acha anụnụ anụnụ setịpụrụ
Yellow imination rattan resin ụlọ ịwụ ngwa ngwa set
12 Yeas ụlọ ịsa ahụ ngwa soplaya Ọrụ Ahụmahụ
Tọrọ ntọala na 2007, bụ nyocha sayensị, imepụta, ire ahịa nke ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, na-eweta ọnụ ọgụgụ ntọala ntọala na ahụmịhe bara ụba nke teknụzụ nkeonwe.
Team Otu ndị siri ike
Lọ ọrụ ahụ nwere ọkachamara ọkachamara nke onwe ha, mepee ngwanrọ nke ngwanrọ nke ha ma nweta akwụkwọ ikike patent software.
■ Ọkachamara / Emechara- Ọrụ Ahịa
Anyị na-enye mmemme ọrụ ndị ọzọ na-ere ahịa, dịka: nkuzi vidiyo, nkuzi ekwentị, ọrụ ntanetị, broshuọ, wdg.
■ Nwee nkwa
Companylọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ ikike nrụpụta, enwetala ikike mba nke akwụkwọ ikike nwebisiinka.
Guangdong JueHeng Group - Ime ụlọ ịwụ ngwa soplaya
Guangdong JueHeng Group, ụlọ ịsa ahụ ngwa soplaya, emi odude ke Dongguan City, Guangdong Province. Anyị bụ ọkachamara na ịmepụta ngwa ịsa ahụ setịpụrụ njikọta polyresin ụlọ ịsa ahụ ngwa ngwa, seramiiki ụlọ ịsa ahụ ngwa, ciment ụlọ ịwụ ngwa, mma ụlọ na seramiiki tableware maka na-eduga Jeriko na North America, South America, Europe, Middle East na gburugburu ụwa.
Anyị nwere 7 ụlọ mmepụta ihe na-ekpuchi 35,000 square mita na nwere ihe karịrị 600 ndị ọrụ. Na ihe karịrị 10 afọ nke na-arụ ọrụ ahụmahụ na a ọkachamara otu, anyị haziri ihe karịrị 5,000 ụlọ ịwụ ngwa tent. Anyị na-azụ ahịa na ndị ahịa na ndị na-emepụta ihe ma na-eje ozi ọtụtụ ụlọ ọrụ Fortune 500 dị ka Bed Bed
& Gafere, Walmart, H
& M, Hilton, TJmaxx, ALDI, Target, na William Sonoma.
Ebumnuche anyị na-enye ndị anyị na ha na-eme ọfụma ngwaahịa dị iche iche na-asọ mpi.
Anyị na-eji nlezianya akpọrọ echiche nke ndị ahịa anyị ma chọọ inye ha ọrụ ọkachamara kachasị.
Naanị hapụ email ma ọ bụ akara ekwentị gị na ụdị kọntaktị ma anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị！